2Checkout: Scale Yako Kubhadhara Kugadziriswa Pasi Pose Kuti Uwedzere Mari | Martech Zone
Kana iwe usati wambove nemukana wekubatanidza mubhadharo wekugadzirisa mhinduro, iwe uri mune rakanyanya ruzivo rwekudzidza. Ma processor ekubhadhara ane akasiyana maficha uye zvipo ... kubva pamubhadharo, nguva yaunobhadhara yako inobatwa, kune ruzivo rwekushandisa pakubuda, rutsigiro rwepasirese, kudzivirira kubiridzira, pamwe nehunhu hwezvishandiso kwauri kuti utarise mari. 2Checkout ndeye-gore-yakabhadharwa sevhisi iyo inowedzera shanduko dzekutengesa pamhepo nekupa zvikwereti zvepasirese neruzivo rwekutenga.
Kubhadhara Kugadziriswa Kwekutarisa Vhidhiyo
Chero zvauri kutengesa, 2Checkout ine zvigadzirwa zvaunoda kurerutsa uye kuyera Software yako sePuratifomu yebasa, ecommerce chikuva, nharembozha yekushandisa kana mamwe mabasa epamhepo
2Tengesai - Zvese zvaunoda kutengesa zvekumba nekunze. 2Sell inoita kuti vatengesi vagamuchire nharembozha uye zvepamhepo kubhadhara kubva kune vatengi pasi rese - zvisina musono, zvakachengeteka, zvakavimbika.
2Zvinyora - Wedzera mari inodzokororwa, wedzera kukosha kwehupenyu, uye chengetwa nezvipiriso zveCheckout.
2Monetize - Iyo-mu-imwe monetization package inobatsira mabhizimusi epasirese kukura madhijitari ekutengesa mari hova. 2Checkout inokubatsira kutengesa zvigadzirwa zvako nemasevhisi pasirese, kuwedzera kushandurwa uye kuchengetedza mitengo, uye kushanda mushe mushe mukuomarara kwemisika yepasirese, kusanganisira VAT uye zvimwe zvinoteererwa.
Global eCommerce Maitiro uye Performance
Kana iwe uri kutsvaga kuyera bhizinesi rako, kuenda pasirese kunovhura bhizinesi rako kune exponential kukura. Heano kuputsika kwekukura kweGlobal eCommerce nenyika, nemhando yekubhadhara, kukosha kweodha, mutauro, chigadzirwa mhando, uye nezvimwe!
Inosanganisirwa pamhiri pese 2Checkout chigadzirwa mubhadharo wepasirese, API uye zvakagadzirwa zvinobatanidza, analytics uye kuburitsa, chengetedzo uye kubiridzira kuchengetedzwa, pamwe neemail uye chat chat.
Saina Kuti Uwane 2 Checkout Yemahara
Kuzivisa: Ini ndiri mubatanidzwa we 2Checkout uye ndiri kushandisa zvakabatana zvinongedzo muchinyorwa chino.
Tags: 2checkout2mari2kutengesa2zvinyoraOsitireriyaKanadhanyikaFuranziJerimanikutengeserana kwepasireseecommerce yepasi roseepasi rose ecommerce maitirokubhadharwa kwepasirese kugadzirisaItariJapanimutauroNetharenzikubhadhara kubhadharaSpeinipamusoro ecommerce nyikaUnited Kingdomnyika dzakabatana